जनताले जे चाहन्छन्, त्यहीँ हुन्छ : संयोजक वली
Friday, 22 Dec, 2017 3:01 PM
गत मंसिर २९ गते सुकिदह गाउँसभाले, गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तनको विरोधमा यहाँका स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले जनभावनाविपरीत जनप्रतिनिधिहरु चलेको समेत आरोप लगाए । गाउँपालिकाको नाम ब्यक्तिको नाममा र सबैलाई पायकपर्ने स्थान सुखाओढारमै केन्द्र यतावत कार्यम गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । उनीहरुले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन रोशनकुमार वली संयोजक रहेको २१ सदस्य संर्घष समितिसमेत गठन गरेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका संयोजक रोशनकुमार वलीसँग जीवन डाँगीले गरेको कुराकानी :
तपाईंको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन के–का लागि ?
मैले जनताको भावनाअनुसार आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हँु । जनताले जे चाहन्छन जनप्रतिनिधिहरुले त्यही गर्नुपर्दछ । तर हाम्रो गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले यहाँका जनताको विरुद्धमा आफूखुशी काम गरिरहेका छन् ।
जनताले सुखाओढारमै केन्द्र चाहन्छन, सुकिदहनै नाम ठिक भएको उनीहरुको भनाइ छ । त्यसकारण आन्दोलनको नेतृत्व गर्न मलाई संयोजक बनाइएको छ । हामी जसरी पनि जनताका माग पूरा गरेरै छोड्छौं ।
नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेकोमा किन आपत्ति ?
गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेकोमा मेरो आपत्ति आफ्नो ठाउँमा छ तर यहाँ त मेरो भन्दा, यहाँ अरु कसैको भन्दा पनि यस क्षेत्रका जनताको प्रमुख कुरा हो नि ? जनताले अहिलेकै नाम र सुखाओढार केन्द्र नै चाहे भने जनताको काम गर्न गएकाहरुले विरुद्धमा काम गरे स्वभाविकै रुपले बिरोधका आवाज उठ्छन् नि । त्यो समाधान गर्ने भन्दा पनि भाग्नेतिर लाग्नु गलत हो ।
गाउँपालिकामा ताला किन लगाउनुभयो ?
अहिले गाउँपालिका कार्यालयमा लागेको ताला खुलिसकेको छ । २ नम्बर वडाको भने यथावत नै छ । वडा २ का अध्यक्ष भुपालजी जनताको सम्पर्कमा नभएका कारण त्यहाँ स्थानीयहरुले ताला खोलेका छैनन् ।
ताला किन लगाइयो भन्ने सन्दर्भमा हामी हाम्रा मागहरु लिएर कार्यालय पुग्दा गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुरजी उपस्थित थिएनन् । उहाँ कता हुनुुहन्छ भन्ने समेत कार्यालयमा थाहा नभएको कार्यालयका कर्माचारीहरुले बताउनुभयो । कार्यालयमा रहनुभएकी उपाध्यक्ष रीताजीले आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्न मान्नु भएन । हुन त उहाँलाई ज्ञापनपत्र के हो थाहा पनि थिएन होला । त्यसरकारण ताला लगाइयो, पछि मागपत्र बुझेपछि ताला खोलिएको हो ।
केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्नुमा गाउँपालिको केही स्वार्थ होला नि ?
अवश्य पनि स्वार्थ देखियो । अध्यक्षज्यूले सुकिदहका अन्य सहिद भुलेर श्रीमतीको नाममा गाउँपालिको नाम राख्न लाग्नुभयो । भुपालजीले ५० हजारमा जग्गा किनेर, गाउँपालिकालाई ८ लाखमा बेच्चे मनसायमा पुग्नुभयो, स्वभाविकै रुपले स्वार्थ देखिन्छ ।
यहाँका जनता जे चाहन्छन्, त्यहीँ हुन्छ ।
​बिमा अब जीवनशैली बन्नेछ– विजयबहादुर शाह, सिईओ, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी
​लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समष्टि प्रतिफल नै सुख होः प्रधानमन्त्री ओली
विज्ञापनमा रवीन्द्रका सपना–रवीन्द्र रिजाल ‘शशी’, अध्यक्ष, एड्भरटाइजिङ एशोसियसन अफ नेपाल(आन)
वामदेवमाथि अन्तर्घात भएको होइन- दामोदर अर्याल
​सबै कुरा सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ–आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल(अन्र्तवार्ता)